Design kanye Ukucaciswa "yohlobo lweVolkswagen Polo"
Ngokokuqala ngqá unokukhathazeka German owaziwa wethulwa emphakathini yayo entsha "yohlobo lweVolkswagen Polo" isizukulwane 5th ngo-2009, unyaka. Aseqala esenzeka kohlaka Geneva International Motor Show. Naphezu kweqiniso lokuthi imoto mass-kukhiqizwa kuyinto engu-3 kuphela ubudala, kule isikhathi esifushane wayekade eyazuza umklomelo. Ngesikhathi "yohlobo lweVolkswagen Polo" umzuzwana kubhekwa njengento imoto engcono ngo-2010 futhi engcono ukungenisa imoto eJapane 2011. Kodwa akugcini lapho. New ngokushesha ngemva DEBUT layo yazuza isimo njengoba imoto esingcono kakhulu eYurophu. imiklomelo okunjalo ukuheha ngokucacile ukunakekela futhi ngeke uyihlupha ngisho ikhasimende olindele kunazo. Siphinde akazange bahlala banganandaba kule, ngakho Ukubuyekeza lanamuhla ayivule kule brand futhi sibheke zonke izici zayo.
"Imoto yohlobo lweVolkswagen Polo" futhi ukubukeka kwaso
Ngokuvamile, uma uqhathanisa imoto nezinye izimoto "Volkswagen", ungathola eziningi ukufana okukhona phakathi kwezimfuneko "Polo" ayekanye nawo "igalofu". Isizathu futhi is klamo yenkampani. Kodwa ngalesi sikhathi, nabaqambi akazange alinge ulinge futhi wenze ingaphandle izinto ezintsha isitayela classic. Front design "zabuna" is kwahambisana by "squinting" izibani ekukhanyeni main futhi ayibanzi Izinsimbi, okwakuyothi ngaphansi kwawo ngokuvumelanayo uqeda ukubukeka bumper entsha nge shape ezahlukene edonsa emoyeni.
Ukuhamba ngazo lapho zisuka isizotha, onjiniyela wakhetha ukunika imoto uhlobo ulaka kusukela izinhlangothi, okwenza kube ususuthi ngaphezulu isondo nemengamo. Sportiness ibangelwa iminyango impumuzo futhi imilenze enamandla labaqaphi elingemuva. Kodwa umbono ezingemuva futhi ekubeni ngithobeke - ezingemuva ukubopha izibani kanye bumper ukwenza imoto bubuhle ngaphezulu.
Ukucaciswa kwezinhlobonhlobo zomsebenzi "yohlobo lweVolkswagen Polo"
Ngaphansi hood imoto zingafakwa omunye uphethiloli izinjini ezine. Ufuna nje uqaphele ukuthi izici lobuchwepheshe "yohlobo lweVolkswagen Polo" ne amayunithi ezimbili zokuqala kuba kakhulu, enganamandla kakhulu. Yiqiniso, izinjini 60 no-70 amahhashi nge zokusebenza umthamo owodwa we-1.2 wamalitha neze ukuhlakaza imoto 200 amakhilomitha ngehora. ukunakwa Closer kufanele ikhokhwe injini elandelayo ezimbili amaJalimane badalelwa for the 5-isizukulwane imoto encane. Phakathi kwabo, turbocharger ephethe namandla 85 "amahhashi" kanye ivolumu 1.4 amalitha, okuyinto eba "Abangamakhulu" emasekhondini esingaphansi 12. Yini eyamukelekayo salokhu injini, ngakho-ke petrol - imoto edolobheni uchitha ngaphansi kuka 8 amalitha per km 100.
Ukucaciswa kwezinhlobonhlobo zomsebenzi "yohlobo lweVolkswagen Polo" nge iyunithi 105-eqinile ufanelwe ukuqashelwa okukhethekile. Imoto nge injini dials "Abangamakhulu" I-9.5 imizuzwana, kuyilapho esiphezulu isiqongo Isivinini imisiwe ngezithuba 190 amakhilomitha ngehora. By the way, abashayeli bathi empeleni umshini angaya futhi 200, ukuze Dynamics of the "yohlobo lweVolkswagen Polo" konke kulungile. A motor ibusa amalitha hhayi ngaphezulu kuka-7 uphethiloli emzini. On ithrekhi imoto uchitha ngaphansi kwe-1 ilitha kaphethiloli.
Njengoba sazi lokhu sporty izinto ezintsha kanye izinga abadumile German Yakha, kungashiwo ukuthi intengo ruble ayizigidi 500 "isizinda" - buyafaneleka.
Njengoba ubona, umklamo kanye izici lobuchwepheshe "yohlobo lweVolkswagen Polo" ngempela uyakufanelekela ngokuwina!
Chevrolet Aveo hatchback stylish nophethiloli kahle imoto
Esivikelo ifilimu izimoto: Izibuyekezo
Road mshini - yokukhalaza ukuma endleleni
Izimoto - movie namaqhawe.
Nissan Teana - Izibuyekezo abanikazi imoto
Tyres Cordiant Winter-Drive: ukubuyekezwa. Cordiant Winter-Drive: izici, amanani
Ukubhala indaba "izindaba ezihlekisayo"
A ezihlukahlukene salads nge isanqante-Korean
Lezibhanana "zegolide" zingasindisa izimpilo zezingane eziningi e-Uganda
Ukwenza amakhandlela ekhaya. amakhandlela okuhlobisa ngezandla
Park "Hermitage". "Hermitage" - ingadi. Moscow epaki "Hermitage"
Intatheli Russian Arkady Babchenko: Biography nesithombe
Indlela yokulungisa isaladi "Ukuthambekela" ngezinkukhu nemifula?
Grifola frondosa: incazelo namakhambi okwelapha izakhiwo
Indlela ukupheka ipea isobho enamaphiko ngabhema
Ithebula ngokulandelana kwazo zonke izenzakalo Pushkin. Ukuphila umsebenzi Pushkin
Bipolar disorder: abantu ukweqisa